Macalinka Chelsea Thomas Tuchel oo ka hadlay Kulanka Manchester United
Kooxda Napoli oo ka fikireysa sidii ay ku xalin laheyd goolhayaheeda Alex Meret.
Home Horyaalka Ingiriiska Macalinka Chelsea Thomas Tuchel oo ka hadlay Kulanka Manchester United
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa ka hadlay muhiimada kulanka axada ee ay la leeyihiin Manchester United dagaalka loogu jiro afarta sare ee Premier League.
Lix dhibcood ayaa u dhaxeysa wiilasha Ole Gunnar Solskjaer oo kaalinta labaad ku jira iyo Blues oo ku jirta kaalinta shanaad iyagoo leh 43 dhibcood.
Tababaraha reer Jarmal ayaa si fiican ku bilaabay noloshiisa Stamford Bridge, Chelsea-na lagama badinin dhammaan sideedii kulan ee uu ciyaaray ka hor kulanka galbeedka London, laakiin kooxda martida ah ayaan weli wax guuldaro ah la kulmin kkulamada horyaalka xilli ciyaareedkan.
“Waxaan rajeyneynaa inaan guuleysan karno, tani waa waxa aan u socono,” ayuu yiri Tuchel.
“Waan ognahay inay caqabad weyn tahay sababtoo ah rikoorkooda guuldaro la’aanta ee ilaa iyo haatan, waan ognahay waxa aan ka hor imaaneyno, koox ku dhaawici karta adiga ilbiriqsi kasta oo leh tayo kubadeed.
“Iyagu waa koox adag waxay difaaci karaan heshiis aad u adag waxayna aad iyo aad ugu fiican yihiin kala-guurka.
” waa kulan adag hadii ay iyagoo guuleestaan waa u muhiim hadii anaga aan guuleysano waa noo muhiim si aan u yareeno farqiga goolasha”
Ugu dambeyntii, waxaan diirada saari doonaa kulanka waxa aan ubaahanahay inaan sameyno wax walbo si aan ugu guuleysano kulankaan adag, waxbadan ayaa inala gudboon laakiin waxaan ku soconaa wado wanaagsan,
Previous articleIsku aadka tartanka Europe League oo La sameeyey.
Next articleFalanqaynta Kulanka Manchester City Vs West Ham United ee Premier League
Wararka Ciyaaraha Maanta2630